केकीसंग क्यारेक्टरका कुरा: अहिलेसम्मकै गाह्रो क्यारेक्टर ‘साशा’नै हो | रंग खबर
केकीसंग क्यारेक्टरका कुरा: अहिलेसम्मकै गाह्रो क्यारेक्टर ‘साशा’नै हो
मलाई ‘ब्लाक स्वन’मा न्याटली पोर्टम्यानले गरेको (लेस्बियन)को क्यारेक्टरले एकदमै मन छोएको छ ।
रंग खबर, काठमाडौँ | वर्तमान समयमा नेपाली फिल्म क्षेत्र विभिन्न विधामा परिवर्तनशिल भैरहेको छ । नेपाली कलाकारले पनि स्टारडम मेन्टेन, आफुलाई फरक भूमिकामा प्रस्तुत गर्ने देखि लिएर दर्शकको चाहनालाई पनि बुझ्न थालेका छन् ।फिल्म क्षेत्रमा राम्रा अभिनय गर्ने र अभिनयमा पूर्णता दिनलाई मेहनत गर्ने कलाकारहरुको संख्या पनि बढ्दै गैरहेको छ ।
राम्रो अभिनय क्षमता भएकी अभिनेत्रीमा पर्न आउने केकी अधिकारी अभिनित ‘लभसाशा’ पौष २८ मा प्रदर्शन हुदैछ । त्यसै फिल्म भित्रको क्यारेक्टर र अन्य क्यारेक्टरको बारेमा रंग खबर रिपोर्टर गणेश वलीले गरेको रंगवार्ता प्रस्तुत छ ।
१) ‘लभसाशा’मा ‘साशा’को भूमिकाबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
अहिलेसम्म गरेका फिल्ममा भन्दा अलि धेरै सन्तुष्टि पाएको फिल्म हो ‘लभसाशा’ । ‘साशा’ बन्न पाएको अर्थमा मात्र होइन की, जुन चिजहरु चाहिँ सिम्पल लाग्थ्यो पहिला, अरुले गरेको देख्दा सजिलो लाग्थ्यो तर, गर्नमा चाहिँ एकदम गाह्रो रैछ भन्ने फिल गरे । जुना कुरालाई मैले अटेम्ट गरेको छु । हेरम दर्शकले कत्तिको रुचाइदिनु हुन्छ ।
२) ‘साशा’को क्यारेक्टर एकदमै नयाँ हो की ? दर्शकले फिल्ममा हेरिसकेका छन् ?
अह.. जुन सुकै पात्र दर्शकले कुनै न कुनै फिल्ममा देखिसक्नु भएको छ होला । तर, उसको भोगाई, उसले गर्ने तरिका र उसलाई कसरि प्ले गराइएको छ फिल्ममा त्यो त डेफिनेट्ली डीफ्रेंट छ । प्रिजेंटेसन डिफ्रेंट छ । त्यो हिसावले ‘साशा’लाई पनि डिफ्रेंट तरिकाले प्रिजेन्ट गरिएको छ ।
मैले यो भन्दा पहिले कुनै पनि डाइलग बोल्दा ड्रामा मिसाउथे, त्यो क्यारेक्टरलाई विल्ड गर्न खोज्थे तर, यसमा चाहिँ मैले सबै चिज त्यागेर स्वत त्यो ‘साशा’लाई फिल गरेर, त्यो मोमेन्ट अफ टाईममा म ‘साशा’ भैदेको भए, म के फिल गर्थे त ? त्यो चिज एक्जाक्ली एक्सप्रेस गर्न खोज्या छु ।
३) ‘साशा’को क्यारेक्टरले केकीलाई कत्तिको चर्चामा ल्याउछ जस्तो लाग्छ ?
म कुनै पनि काम चर्चामा आउनलाई गर्दिन । जहिले पनि मैले कुनै फिल्म गर्दा यो फिल्मले मलाई कहाँ पुर्याउछ, कुन उचाई दिन्छ भनेर म गर्दिन । कुनै नयाँ कुरा, जो मैले गरेको छैन । मेरो कम्फट जोन भन्दा बाहिरको छ । त्यो, जुन कुरा मैले अटेम्ट गरेको छैन । त्यहि कुरा अटेम्ट गर्नु नै मेरो लागि सफलताको खुड्किलो हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
४) केकीले अभिनयमा डुब्नलाई के के गर्नुहुन्छ ?
त्यो सिच्वेसनलाई बुझ्ने कोशिस गर्छु फस्टमा । त्यस्तो सिच्वेसन रियल लाइफमा परेको खण्डमा कसरि रियाक्ट गरिन्छ त ? त्यता तिर चाहिँ केन्द्रित हुन्छु । त्यो क्यारेक्टरलाई परेको सिच्वेसन यदि, म भैदिएको भए मैले कसरि रियाक्ट गर्थे होला त भन्ने कुरा फील गर्छु । जनरल्ली यसरीनै अभिनय गर्ने गर्छु ।
५) भूमिकालाई पूर्णता दिनलाई मेहनत कत्तिको गर्नुहुन्छ ?
मेहनत गर्छु । मैले ‘मसान’मा त्यो ‘हेलेन’को क्यारेक्टर गर्नु पर्दा धेरै रिसर्च गर्नु परेको थियो । आफुले देखेको भोगेको क्यारेक्टर भन्दा भिन्न थियो । अलि अगाडीको पुस्ताको क्यारेक्टर गर्नु पर्दा हजुरआमाहरुलाई धेरै सोधेको थिए । पुरानो फोटोहरु हेर्थे । त्यतिबेलाको लवाईखवाईको बारेमा रिसर्च गरेको थिए ।
अनि ‘फन्को’मा पनि पश्चिमेली लवजको क्यारेक्टर गर्दा पनि रिसर्च गरेको थिए । म पुर्वमा जन्मेर काठमाडौँमा हुर्केकी केटिलाई त्यो पश्चिमेली युवतीको क्यारेक्टर गर्दा गार्हो भएको थियो । त्यसैले भिन्न खालको क्यारेक्टर गर्दा चाहिँ अलि धेरैनै मेहनत गर्नुपर्छ ।
६) केकीलाई एकदमै गर्न मन लागेको क्यारेक्टर ?
मलाई एकदमै गर्न मन लागेको क्यारेक्टर भनेको मेन्टली डिजेवल खालको, फिजिकल्ली पनि कुनै च्यालेन्जेज खालको क्यारेक्टर गर्न मन छ ।
७) केकीले चाहेको तर, नेपाली फिल्ममा नअटाइएका क्यारेक्टर, यस्तो कुनै आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
त्यस्तो त धेरै क्यारेक्टर छन् समाजमा । तर, मलाई चाहिँ नेपालमा कमै मात्र बन्ने, कुनै चर्चित व्यक्ति जसले आफ्नो मेहनतबाट समाजमा परिवर्तन ल्याएको छ । हो त्यस्तो व्यक्तिको बायोपिक फिल्म बनिदिए हुन्थ्यो र त्यस्तो क्यारेक्टर पनि गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
८) फिल्म हेर्दा केकीलाई एकदमै छोएको क्यारेक्टर चाहिँ कुनै छ ?
९) केकी टप फाइभको मनोनयन परेको छ । तर, आफु १९ र प्रतिस्प्रधी २० को भैदिदा कस्तो महसुस हुन्छ ?
यो सालको मनोनयनमा ‘भाग सानी भाग’बाट परेको क्यारेक्टर मेरो २० नै थियो जस्तो लाग्छ । ‘भाग सानी भाग’को क्यारेक्टर वन अफ माई बेस्टमै थियो । त्यो जस्तो क्यारेक्टर अब म पाउदिन होला । तर, म भन्दा पनि २१ नम्रता श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो होला त्यसैले उहाँले पाउनुभयो ।
यसमा म केहि चित्त दुखाउदीन । मैले गरेको क्यारेक्टर पनि आफैंमा गार्हो थियो । सायद क्यारेक्टर गार्हो भएपनि वहाँले राम्ररी क्यारेक्टरमा न्याय गर्नुभएको थियो होला ।
१०) कुन कलाकारको अभिनयबाट प्रभावित हुनुहुन्छ ?
कंगना रनाउत र आलिया भट्ट बलिउडमा, नेपालमा गौरी मल्ल र मेनुका प्रधानको काम एकदमै मन पर्छ ।
११) कुनै क्यारेक्टर छ ? केकीलाई एकदमै गार्हो लागेको ?
सायद ‘साशा’नै होला ! पहिला सोच्दा त्यति गार्हो नलागेपनि पछी गर्दा खेरि एकदमै गार्हो लाग्यो । ‘साशा’को क्यारेक्टरमा भिज्नलाई एकदमै गार्हो भयो । बरु ‘बितेका पल’को क्यारेक्टर सजिलो थियो । हेलेनको क्यारेक्टर सजिलो थियो । सायद ऋचा दिदीले त्यो ‘भिजागर्ल’मा गरेको क्यारेक्टर सजिलो थियो होला । ‘उमा’मा गरेको क्यारेक्टर सजिलो थियो होला । तर, ‘साशा’को क्यारेक्टर गर्दा त्यो मोमेन्ट अफ टाईममा ‘साशा’जस्तो क्यारेक्टरलाई फिल गर्न एकदमै गाह्रो भएको थियो ।